Fotoana famakiana: 3 minitra Hotjar dia manome fitaovana feno ho an'ny fandrefesana, firaketana, fanaraha-maso ary fanangonana valiny amin'ny alàlan'ny tranokalanao amin'ny fonosana mora vidy. Tsy mitovy amin'ny vahaolana hafa, i Hotjar dia manolotra drafitra miaraka amina drafitra mora vidy mora ahafahan'ny fikambanana mamorona fahitana amin'ny habaka tranonkala tsy voafetra - ary ampiasain'ny mpampiasa tsy misy fetra. Ny fitsapana Hotjar Analytics dia misy Heatmaps - manome endrika an-tsary ny tsindry ataon'ny mpampiasa anao, paompy ary fitondran-tsoratry ny horonana. Firaketana mpitsidika
Fotoana famakiana: 2 minitra EyeQuant dia maodely mpanara-maso mialoha azo jerena izay mijery manokana izay hitan'ny mpampiasa amin'ny pejy ao anatin'ny 3-5 segondra voalohany. Tsotra ny hevitra: ao anatin'ny 5 segondra dia tokony ho hitan'ny mpampiasa hoe iza ianao, inona ny volavola omenao ary inona no hatao manaraka. EyeQuant dia mamela ny fanatsarana ny famolavolana pejy iray hahazoana antoka fa izany no izy. Ireto ny valim-pifidianana maimaimpoana amin'ny demo EyeQuant… Tena faly aho
Fotoana famakiana: <1 minitra Rehefa naverinay indray ny gazetinay dia te-hanao ny rohy fisoratana anarana ho fisehoan-javatra manjaka ao amin'ny tranokalanay izahay. Nanampy ampaham-pitetezana eo an-tampon'ny tranokala izahay ary tsy mampino izany. Na dia teo aza ny fahazoantsika mpanjifa iray na roa teo aloha, dia mahazo mpanjifa am-polony isan-kerinandro izahay. Mitombo malaza izao ny mailaka Teknolojia Marketing, miaraka amin'ireo mpanjifa efa ho 3,000! Te-hanampy dropdown vitsivitsy fanampiny aho
Fotoana famakiana: <1 minitra Vao nahazo naoty avy amin'ny mpampita hafatra (lohateny lehibe) tao amin'ny Yooba.com, serivisy miorina amin'ny tranonkala izay manomana ny hanombohana ity Lohataona ity. Somary cryptic kely ilay horonantsary saingy mahaliana ny atiny ao amin'ilay tranonkala: Yooba dia serivisy B2B miorina amin'ny tranonkala ho an'ireo matihanina amin'ny marketing. Ny tanjonay dia ny ahafahana mifantoka amin'ny famoronana sy ny zava-bita. Yooba dia manome anao sehatra an-iditra ho an'ny varotra nomerika. Manome fampiantranoana sy tahiry